Genesis 26 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Isak ne Rebeka asetena wɔ Gerar (1-11)
Onyankopɔn sii ne bɔhyɛ so dua kyerɛɛ Isak (3-5)
Nsubura ho akasakasa (12-25)
Isak ne Abimelek yɛɛ apam (26-33)
Esau waree Hitifo mmea baanu (34, 35)
26 Afei ɔkɔm baa asaase no so. Ɛsono ɔkɔm yi, ɛnna ɛsono nea edii kan bae wɔ Abraham bere so no.+ Ɛmaa Isak kɔɔ Filistifo hene Abimelek nkyɛn wɔ Gerar. 2 Na Yehowa yii ne ho adi kyerɛɛ no sɛ: “Nkɔ Egypt. Tena asaase a mɛkyerɛ wo no so. 3 Tena asaase no so sɛ ɔhɔho,+ na mɛka wo ho na mahyira wo bere nyinaa, na wo ne w’asefo* na mede nsaase yi nyinaa bɛma mo,+ na mɛma ntam yi a mekaa wo papa Abraham no aba mu:+ 4 ‘Mɛma w’asefo* ayɛ bebree te sɛ ɔsoro nsoromma,+ na mede nsaase yi nyinaa bɛma w’asefo;*+ na asaase so aman nyinaa nam w’asefo* so benya nhyira,’+ 5 efisɛ Abraham tiee m’asɛm yɛɛ nea mehwehwɛ nyinaa, na odii m’ahyɛde ne m’atemmusɛm ne me mmara so.”+ 6 Enti Isak kɔɔ so tenaa Gerar.+ 7 Bere biara a mmarima a wɔwɔ hɔ no bebisa ne yere ho asɛm no, ɔka sɛ: “Ɔyɛ me nuabea.”+ Ná osuro sɛ ɔbɛka sɛ ɔyɛ ne yere, efisɛ na ne ho yɛ fɛ paa,+ enti ɔkae sɛ, “Anhwɛ a Rebeka nti mmarima a wɔwɔ ha yi bekum me.” 8 Ɔtenaa hɔ kakra no, da bi, Filistifo hene Abimelek hwɛɛ ne mfɛnsere mu hui sɛ Isak ne ne yere Rebeka redi dɔ.*+ 9 Ɛhɔ ara na Abimelek frɛɛ Isak kae sɛ: “Mahu sɛ ɔbea yi yɛ wo yere! Dɛn nti na wokae sɛ, ‘Ɔyɛ me nuabea’?” Ɛnna Isak ka kyerɛɛ no sɛ: “Nea enti a mekaa saa ne sɛ, na misuro sɛ anhwɛ a ne nti wobekum me.”+ 10 Na Abimelek toaa so sɛ: “Dɛn na woayɛ yɛn yi?+ Anka worebɛyɛ ama obi ne wo yere ada, na wode asodi abɛto yɛn so!”+ 11 Ɛnna Abimelek hyɛɛ mmara maa nkurɔfo no nyinaa sɛ: “Obiara a ɔde ne nsa bɛka ɔbarima yi ne ne yere no, okum na wobekum no!” 12 Akyiri yi, Isak yɛɛ afuw wɔ asaase no so, na saa afe no, onyaa nnɔbae mmɔho 100, efisɛ Yehowa hyiraa no.+ 13 Ɔbarima no bɛyɛɛ ɔdefo, na ɔkɔɔ so nyaa ne ho kosii sɛ ɔbɛyɛɛ ɔdefo kɛse. 14 Obenyaa nguan ne anantwi ne nkoa pii,+ na Filistifo no ani beree no. 15 Enti nsubura a ne papa Abraham nkoa tui bere a na ɔte ase no, Filistifo no de dɔte siw ne nyinaa.+ 16 Afei Abimelek ka kyerɛɛ Isak sɛ: “Tu fi yɛn nkyɛn ha kɔ, efisɛ woabɛyɛ kɛse asen yɛn koraa.” 17 Enti Isak tu fii hɔ kosii ne ntamadan wɔ Gerar+ bon mu, na ɔtenaa hɔ. 18 Afei nsubura a Isak papa Abraham nkoa tui bere a ɔte ase no, Isak san tuu mu bio. Saa nsubura no na Abraham wu akyi Filistifo no siw no no.+ Edin a ne papa de totoo nsubura no, ɛno ara na ɔsan de totoo so.+ 19 Bere a Isak nkoa no tuu bon no mu no, wonyaa abura a nsu pa wom. 20 Na akasakasa baa Gerar nguanhwɛfo ne Isak nguanhwɛfo ntam, na wɔkae sɛ: “Nsu no yɛ yɛn dea!” Enti ɔtoo abura no din Esek,* efisɛ wɔne no nyaa akasakasa. 21 Ne nkurɔfo no san tuu abura foforo, na ɛno nso wɔne wɔn peree ho. Enti ɔfrɛɛ no Sitna.* 22 Akyiri yi, ofii hɔ kotuu abura foforo, na ɛno de wɔne no ampere ho. Enti ɔfrɛɛ abura no Rehobot* kae sɛ: “Afei de, Yehowa ama yɛanya yɛn ho atwaye na wama yɛadi yiye wɔ asaase yi so.”+ 23 Ɛnna wofii hɔ kɔɔ Beer-Seba.+ 24 Na Yehowa yii ne ho adi kyerɛɛ no saa anadwo no, na ɔkae sɛ: “Mene wo papa Abraham Nyankopɔn.+ Nsuro,+ efisɛ meka wo ho, na m’akoa Abraham nti mehyira wo, na mɛma w’asefo* ayɛ bebree.”+ 25 Enti osii afɔremuka, na ɔbɔɔ Yehowa din frɛɛ no wɔ hɔ;+ afei Isak sii ne ntamadan wɔ hɔ,+ na ne nkoa tuu abura wɔ hɔ. 26 Akyiri yi, Abimelek ne ne fotufo Ahusat ne ne sahene Pikol+ fi Gerar baa ne nkyɛn. 27 Ɛnna Isak bisaa wɔn sɛ: “Moaba me nkyɛn rebɛyɛ dɛn? Ɛnyɛ mo ara na ɔtan nti mopam me fii mo mpɔtam hɔ no?” 28 Afei wɔkae sɛ: “Yɛahu ampa ara sɛ Yehowa di w’akyi.+ Enti adwene a yɛafa ne sɛ, ‘Yɛsrɛ wo, wo ne yɛn nka ntam, na yɛne wo nyɛ apam+ 29 sɛ worenyɛ yɛn bɔne biara sɛnea yɛamfa yɛn nsa anka wo na yɛne wo adi no yiye, na yɛagya wo kwan asomdwoe mu no. Yɛahu sɛ wo na Yehowa ahyira wo.’” 30 Ɛnna ɔtow wɔn pon, na wodidi nomee. 31 Ade kyee no, wɔsɔree ntɛm, na wɔkekaa wɔn ho ntam.+ Ɛno akyi no, Isak gyaa wɔn kwan ma wɔde asomdwoe fii ne nkyɛn kɔe. 32 Saa da no, Isak nkoa no bɛkaa abura a wotui+ no ho asɛm kyerɛɛ no sɛ: “Yɛato nsu!” 33 Enti ɔfrɛɛ no Siba. Ɛno nti na wɔfrɛ kurow no Beer-Seba+ besi nnɛ no. 34 Bere a Esau dii mfe 40 no, ɔwaree Hitini Beeri ba Yudit ne Hitini Elon ba Basemat.+ 35 Ɛno maa Isak ne Rebeka dii awerɛhow kɛse.*+
^ Anaa “Isak abam ne yere Rebeka.”
^ Ɛkyerɛ, “Akameakame.”
^ Ɛkyerɛ, “Sobo.”
^ Ɛkyerɛ, “Baabi a Ɛhɔ Trɛw.”
^ Nt., “honhom dii awerɛhow.”